डा. अग्रवालको अन्त्येष्टी, विराटनगर शोकमा - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:३८
विराटनगर, ८ जेठ । मस्तिष्कघातका कारण निधन भएका पूर्वकै लोकप्रिय बाल रोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवालको विराटनगर–८ स्थित विश्रान्ती घाटमा आज दिउँसो अन्त्येष्टी गरिएको छ ।
दाहसंस्कारमा जनलहर उर्लियो । बरिष्ठ डाक्टरहरु, विराटनगर महानगरका मेयर, राजनैतिक दलका नेता, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्व, आफन्त र शुभचिन्तकको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यस अघि उहाँको शवलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि विराटनगर–९ स्थित घरमा राखिएको थियो । डा. अग्रवालको निधनमा विराटनगर स्तब्ध बनेको छ ।
परिवारका सदस्य, आफन्त, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र शुभचिन्तक शोकमा डुबेका छन् । डा. अग्रवालको निधनसँगै विराटनगरको कोसी अस्पतालले तीन साताको अवधिमा दुई विशेषज्ञ चिकित्सक गुमाएको छ ।
यस अघि गत वैशाख १८ गते कोसी अस्पतालकै बरिष्ठ हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. मुकुन्द दाहालको निधन भएको थियो । त्यसको तीन सातामै अस्पतालले बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. अग्रवाललाई पनि गुमाएको हो । मस्तिष्कघात भएपछि वैशाख २४ गतेदेखि नोबेल शिक्षण अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर अग्रवालको उपचार सुरु गरिएको थियो ।
उपचारमा संलग्न बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ एवं नोबेलका निर्देशक डा. राजेश नेपालले धेरै प्रयास गर्दा पनि अग्रवाललाई बचाउन नसकिएको जानकारी दिनु भयो ।
नोबेल अस्पतालले गयराति १०ः५८ बजे डा. अग्रवालको निधन भएको जनाएको छ । उहाँ छात्तीमा समस्या आएपछि आफै कार हाँकेर उपचारका लागि नोबेल पुग्नु भएको थियो ।
तर उपचार सुरु गर्दा उहाँको ब्रेड डेड भइसकेको चिकित्सकले बताएका छन् । अग्रवालको उपचारमा डा. नेपाल, बरिष्ठ न्युरो फिजिसियन डा. डिल्लीराम काफ्ले, न्युरो सर्जन डा. प्रकाश काफ्ले लगायतका विशेषज्ञ चिकित्सक टोली खटिएका थिए । अग्रवाल ६ वर्षदेखि कोसी अस्पतालमा कार्यरत हुनु हुन्थ्यो ।
मिजासिला स्वभावका डा. अग्रवाल सबैसँग चाँडै घुलमिल हुने, दुःख परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने र गरिबका छोरा छोरीको निःशुल्क उपचार गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
उहाँको आवद्धता सामाजिक क्षेत्रमा पनि थियो । कोसी अस्पतालका बरिष्ठ हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. यज्ञराज खरेलले अग्रवालको निधनले स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा अपुरणिय क्षति पुगेको बताउनु भयो ।
अग्रवालकी पत्नी डा. कोपिला अग्रवाल विराट टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत हुनु हुन्छ । अग्रवाल दम्पतिका १४ वर्षीय एक छोरी छन् ।
मतदाताबाट टाढिदै काँग्रेस नेता आचार्य
विराटनगर, १३ जेठ । नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाले आज विराटनगरका चिकित्सकहरुलाई मास्क र स्यानिटाईजर...